သုတေသန - သင်၏ ဦး နှောက်တွင်သင်၏ ဦး နှောက် - အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုအမျိုးအစားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
ကျယ်ပြန့်သုတေသနမော်ကွန်းတိုက်ပါရှိသည်။ သင်ဤမှတဆင့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အဆိုပါပင်မသုတေသနစာမျက်နှာလက်ရှိသုတေသနခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူစတင်သည်ရာ။ ကြောင်းစာမျက်နှာ၏အလွန်အောက်ခြေတွင်သငျသညျကဲ့သို့သောလေ့လာမှုအမျိုးအစားမှလင့်များ, ရှာတှေ့နိုငျ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, porn အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်စွဲနှင့် အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု.
Propaganda အပိုင်းအစများအားငြင်းခုံခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းဆိုင်ရာဝေဖန်မှုများ Lay ဆောင်းပါးများအတွက်လယ်ကွင်းရဲ့ပိုပြီးသံသယရှိ porn သုတေသနနှင့်တောင်းဆိုမှုများအချို့အမှာစကားပြောကြား။
ဒီမှာသင်လေ့လာနိုင်ပါတယ် porn နှင့်လိင်စွဲများအတွက်သင့်လျော်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါ လာမည့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ထုတ်ဝေမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အဆိုပြုထားသည် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11), အဖြစ်၏ရပ်တည်ချက်ကို စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း (စွဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများ) ။ ၎င်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် WHO မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခုအခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်အဆင်ပြေ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်လေ့လာမှုများ၏အသုံးဝင်သောစာရင်းဖြစ်ကြသည်။
1) Porn / လိင်စွဲ? ဒီစာမျက်နှာက neuroscience-based လေ့လာမှုတိုင်းကိုစာရင်းပြုစုထားတယ် porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများ၏ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ လေ့လာမှု ၅၅ ခုမှတစ်ခု မှလွဲ၍ ဆေးစွဲမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည်။ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်တွေကိုထင်ဟပ်စေတယ်။
porn / လိင်စွဲလမ်းအပေါ် 2) ကအစစ်အမှန်ကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 32 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှု၏ 3) သက်သေလက္ခဏာများ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ) ။ နောက်ထပ်စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 15 လေ့လာမှုများ.
4) "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းပျောက်ကရှင်းပြသည်သောကလက်ခံစကားပြောအမှတ် Debunking: အနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။.
5) Porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
6) 80 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ ရလဒ်များ။ ဤသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်တွင်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာဖော်ပြသည် do ဆိုးကျိုးများကိုအစီရင်ခံပါ arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ
စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက် 7) Porn အသုံးပြုမှု? လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
Porn သည်ယုံကြည်ချက်များ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုသက်ရောက်သည်
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် 8) Porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများထုတ်စစ်ဆေး: 40 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - သို့မဟုတ်ဤ ၂၀၁၆ meta-analysis ၏လေ့လာချက် ၁၃၅ ခု၏အကျဉ်းချုပ် - မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
porn အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်, အတင်းအကျပ်နှင့်အကြမ်းဖက်မှု
9) အဘယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကောအသို့နည်း နောက်ထပ် Meta-analysis သည်: အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2015)။ ကောက်နုတ်ချက်:
10) အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများအကြံပြု အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသောလူငယ်များသည်လက်တွေ့မကျသည့်လိင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ပြသည့်တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
11) အားလုံးလေ့လာမှုများဆက်စပ်သည်မဟုတ်လော Nope: အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုပြသထားသောလေ့လာမှု ၉၀ ကျော်၊ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်
အချစ်ရယ် & ဝါဒဖြန့်
မြင် မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ကဆိုကြသည်အဘယျသို့မဟုတ်ကြောင်းမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများသည်။ naysayer စကားပြောသည့်နေရာနှင့်ချယ်ရီရွေးချယ်မှုလေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးကိုပြိုကွဲစေရန်ဤကျယ်ပြန့်သောဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ။ "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ ဘက်လိုက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မိနိုင်မလဲဆိုတာ primer: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်.
ညစ်ညမ်းသောသုတေသီများ (သို့) ဘလော့ဂါများမှထုတ်လွှင့်သောဒဏ္myာရီများစွာကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည့်တင်ဆက်နည်းများကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူစေရန် Gabe Deem ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဗီဒီယို ၂ ခုကိုကြည့်ပါ။ "PORN ဒဏ္THာရီများ - စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရား"နှင့်Porn Playbook: Deny၊ Disinform and Defame"။
အောက်ပါဆွေးနွေးပွဲများ (vimeo တွင်) ကို ၂၀၁၈ NCOSE ညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည် -Porn-Science ၀ ါဒဖြန့်ချိခြင်းကိုသူတို့တွေ့သောအခါလူတို့သည်အသိအမှတ်ပြုကြသည်"Jacob Hess (နည်းဗျူဟာခြုံငုံသုံးသပ်) "astroturfers" က porn အသုံးပြုမှု၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများကိုငြင်းဆန်သည်။ )porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?ဂယ်ရီ Wilson မှ (လေ့လာမှု ၅ ခုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားသည် ၀ ါဒဖြန့်ချိသူများက၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်း (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုဆိုကြသည်)
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုသုတေသန"
Pingback: Porn အောင်မြင်ခြင်းကိုမည်သို့သတ်သနည်း၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဖြတ်တောက်နည်း - SELFCONQUERING
Pingback: Pornhub ကိုဆန့်ကျင်သောအခြားတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အမှန်ပင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်စော်ကားခြင်းသာဖြစ်သည်။ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ရန် CEASE / စင်တာ
Pingback: ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်နှစ်တာ NoFap ခရီးစဉ် – Aaron Isakov
Pingback: ပေါ့ပ်စူပါစတားသည် သူမအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာ - The Mad Truther အဖြစ် နောက်ဆုံးတွင် ညစ်ညမ်းအကြောင်းအမှန်တရား ထွက်ပေါ်လာသည်။